Riyada Antalya, Khadadka Gawaarida Tünektepe Calle La bilaabay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTelefishinka Hayali, Tünektepe Cable Line ayaa la bilaabay
Telefishinka Hayali, Tünektepe Cable Line ayaa la bilaabay
06 / 02 / 2017 07 Antalya, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Dreams of Antalya, Tünektepe Cable Line Line La furay: Degmadda Antalya oo dhamaystirtay dhismaha Tünektepe Cable Car, 'Cagahaaga waa laga jarayaa dhulka' waxaa la furay slogan. 12 Kharashka dariiqa furan oo bilaash ah ilaa bisha Febraayo waxaa loo aqoonsaday hal qof 15 TL iyo laba qof 20 TL.
Degmada Badhasaabka Magaalada Antalya ayaa dhamaystiray riyadii sanadlaha ee 30 ee Mashruuca Teleferic ee Tünektepe oo u adeegay. Ka dib markii safarka daqiiqadii 9 ee Sarısu ilaa Tünektepe uu dhexmaray baabuur telefishan, wariyayaashu waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee ka baxa. Madaxweyne Turel ayaa sheegay in xayndaabku uu bilaash u noqon doono wiiggii 1.
Menderes Türel, Duqa Magaalada Metropolitan, ayaa shir saxaafadeed ku qabtay Tünektepe sababtoo ah dhamaystirka xaruntii Telesom ee Sarisu-Tünektepe, oo mar walba lagu riyooday sannado. Kuwa ugu horreeya ee gaadhay Tünektepe ee baabuurta telefanku waxay ahaayeen Madaxa Tafsiir iyo xubno ka tirsan saxaafadda. Saxafiyiinta ayaa ka soo qaybgalay shirkii, kaas oo ay weheliyeen aragti aan la isku haleyn karin ee Antalya. Duqa magaalada Turel ayaa u sheegay sheekada 1986, oo ah riyada mashruuca telefoonka cabirka ee sannado badan loo sameeyay, sida soo socota: "Injirta mashruuca halkan waa markii ugu horreysay ee Mr. Hüseyin Öğütçen, oo ah gudoomiyaha guddiga fulinta. Ka dibna mashruucani wuxuu bilaabmaa. 1970, heshiis ayaa la saxiixay shirkadda heshay gundhigga casriga ee Döner Casino iyo goobaha dalxiiska wakhtigaas. Waxaa sidoo kale lagu sheegay qandaraaska in maalgashi gaar ah loo samayn doono Tünectepe iyo Sarisu oo muujinaya booska Maamulka Khaaska ah. Heshiiskan. Taariikhda 1986. Si kastaba ha noqotee, habka bilowday tan iyo markaas ayaa la dhammeeyey waqtigeena. Waxay ku dhamaanaysaa xilligeena. Sheekadu waa muddo dheer, inkastoo heshiiska qandaraaska ee shirkadda qandaraaska iyo Maamulka Khaaska ah ee 1986, arrinta la xidhiidha aagga 1986 ee lugta koowaad ee baabuurta telefishanka iyo saldhigga gobolka Sarisu lama xallin doono illaa doorashadda badhasaabka muddada koowaad. Markii aan noqdo duqqaarka markii ugu horeysay ee 10, waxaan xalinay meesha ay ku taallaan saldhigga telefishinka ee kumbuyuutarada adigoo isticmaalaya qorshaha degaanka ee 2004. Ka dib markaa, shaqooyinkaas waxaa fuliya Maamulka Khaaska ah kadib markaan ka tagno boostada. Mar labaad, Guddoomiyaha Mudane, Mudane Ahmet Altıparmak, waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo mahadnaqa labadeena guddoomiyenimadeena halkan, tani waa sidii loo fulin lahaa hindisaha wabiga. Sanadka 10. Kadibna hindise kale ayaa lagu qabtaa 2012. Waa muhiim inaad bilowdo ganacsi. Markaan ku soo laabano xafiis ka dib markii 2013 sannadkii, waxaanu qaadaneynaa dhismaha gawaarida tiknoolajiyadan sida Dawladda Hoose ee 5. Waqtiga la wareegidda, sicirka garashada jireed ee dhismaha wadka ayaa xitaa ka hooseeya 2014. Waxaan la shaqeyneynaa faham ah in mashruuc kasta oo bilow ah la dhammeeyo. Waxaan rabnaa in qandaraaslaha si deg deg ah isaga tago adigoo ku martiqaadaya qandaraaslaha si uu u buuxiyo masuuliyada uu qaatay. Dhismayaasha dhismaha ayaa sii socon doona muddadeena labaad. Si kastaba ha ahaatee, waxaan joojinnaa hindisada sababtoo ah dhibaatooyinka dhaqaale ee shirkadda qandaraas-bixiyaha ah waxaananu kufaraxnaa mashruuca markii labaad. Maanta, waxaan awoodnaa inaanu adeegga u furno adeegga adoo dhamaystiraya geeddi-socodka dhamaystirka ee aan ku bilaabanay markii labaad "
9 AT TUNEKTEPE MINUTES
Mashruucan oo loo yaqaan '14 million 694 bin 818 kun 1706 mashruuc walaac leh, marka la barbardhigo mashaariicda la midka ah ee gobollada kale, ayaa sheegay in madaxweyne Turel, madaxweyne ku xigeenku uu siiyay xogtan soo socota: "Qiimaha magaalooyinka kale ee isku midka ah waa laba jeer qiimaha aan ku bixino. Baabuurkayagu wuxuu ku saabsan yahay mitirka 3604 iyo dhererka fiilada waa mitirka 8. 36 awooda qof, 1200 cabin waxaan u adeegnaa. 9 waxay si fudud u qaadi kartaa dadka. Tünektepe waxaad ku gaari kartaa meel sare oo mitir 605 ah oo ku saabsan qiyaasta XNUMX. Ilaa maantadan, imtixaannada imtixaanku hadda waa la dhammeeyaa. Waxay sidoo kale u furan tahay faa'iidada dadka reer Antalya. "
TURKEY EE jaban TELPHER
Turel furitaanka rasmiga ah ee mashruuca ayaa la qaban doonaa isbuuca soo socda iyadoo la qaban doono xaflad furitaan ah ra'iisal wasaaraha Binali Yildirim, Antalya, iyadoo dhiirrigelinta munaasabadda furitaanka wadatashiga ah, Türel, furitaanka rasmiga ah ee Tünektepe'na wuxuu sheegay in lacagaha xawaaladda ee bilaashka ah ee Antalya. Madaxweynaha Turel, ka dib markii furitaanka rasmiga ah ee lagu raaco baabuur cable, safar wareeg qof pounds 15, ayaa sheegay in laba qof oo loo aqoonsaday pounds 20, "Tani waa jaban ajuurada maaraysay baabuur cable Turkiga. Toddobaadkii hore waxaan ka qaybqaatay barnaamijka magaalada Uludağ ee magaalooyinka waaweyn.
Gaadiidka Uludag ujuuro lacag ah 38. Dabcan, waa in aan sheegnaa in cabirayaasheena ay aad u roon tahay. "
Lugtaada waa la gooyaa dhulka
Madaxwaynaha Menderes Turel ayaa sheegay in dadka reer Antalya ay si fudud u tegi karaan Tünektepe inta lagu jiro maalintaas, waxayna tidhi: "Dalxiisayaasha ajnabigaa waxay awoodi doonaan inay daawadaan Antalya sida muuqaalka shimbiraha. Jabhadeena "Cagahaaga waa la gooyaa dhulka" Mashruucan wuxuu noqon doonaa qalab wax lagu gooyo cagaha dadka reer Antalya ".
Turel wuxuu sheegay inuu farxad u yahay ra'yi la mid ah riyo kale oo ka mid ah Antalya, shirkadda degmada ANET. in la sameeyo. Turel wuxuu xusuusiyay in Tünektepe uu leeyahay mashruuc aragti ah oo yiri: "Tani waa mashruuc kale oo riyo ah oo Antalya ah. Waxay sidoo kale ka muuqan doontaa qaab muuqaal ah oo siin doona Antalya qiime aad u kala duwan. Daraasadaheena kala duwan ayaa sii socota. Ansixinta ra'iisul wasaaraha, waxaanu xaqiijinay bedelaaddan aaggan oo loo gudbiyay Agaasimaha Guud ee Xoolaha. Agaasimkayaga guud ee Forestry wuxuu hadda u wareejinayaa Agaasimaha Guud ee Beeraha Qaranka. Wafti waxaa loo sameeyey ujeedadan. Ka dib, ka dib qorshe ah in aan la samayn doono Golaha Guud ee Badbaadinta Hantida Dabiiciga ah, waxaanu ogaan doonaa mashruucan ku habboon Antalya. Ma jiri doonto wax ka badan hal mitir. Qaab dhismeedka hadda jira waa la burburin doonaa, waxaana jiri doona xarun dalxiis oo leh cufnaan isku mid ah oo ku dhow hal mitir oo labajibbaaran. Dabcan, berriga daawashada halkan ayaa sii wadi doona in la isticmaalo si cad. Dhinaca dambe ee dhismaha ayaa ogaan kara xarunta dalxiiska. Markii hore waxaa loo isticmaalaa xarun dalxiis. Dhinacaas, waxaa suurtogal ah in mar labaad lagu taageero dalxiiska dalabaadka hoyga. "
WAXYAABAHA ADEEGYADA LA HABO
Waa maxay sababta adeegyadan aan la bixin markii aan ka shaqaynay xafiis muhiim ah, Madaxweyne Turel ayaa sheegay, in aanu aragno Agaasimaha Guud ee Guryeynta, Agaasimaha Guud ee Guryaha, Agaasimaha Guud ee Guryaha Dabiiciga ah, Agaasimaha Guud ee Beeraha Qaranka, Agaasimaha Guud ee Beeraha Qaranka, Wasaaradda Dalxiiska, si uu u xaqiijiyo mashruuc Tünektepe ah. Arrintan waxaa lagu xallin karaa ruqsadda Agaasimaha Guud ee Maal-gashiga Maal-gashiga iyo ugu dambeyntii Agaasimaha Guud ee Hantida Dabiiciga ah ee hoos yimaada Wasaaradda Deegaanka iyo Magaaleynta. Dabcan, haddii aan ra'iisul wasaarenimo soo saaro, 6 waxaa lagu xallin karaa ogolaanshaha hay'ad gooni ah. Waxay naga timaadaa xilligii 2004-2009 si ay u kala tagaan saldhigga heerka eber. Qofna dib uma eegin. Laga soo bilaabo 1986 ilaa 2005, wax dadaal ah looma sameynin si loo kala saaro saldhigga garoonkan. Waqtigaas waxaan mar kale ku xallineynaa daraasad la leh hay'ado kale. Taasi waa sababta ay u shaqeyso. Sidaa darteed sababta ma u dhacday ilaa hadda, iyo hadda waa, iyada oo dadaalkan. Tani dabcan waa wadajir, wadajir, habka maaraynta isku dhafka.
Imtixaanaadka mannedu wuxuu ka bilaabmaa laynka baabuurta ee Sarısu-Tünektepe ee Antalya
Nidaamka hirgelinta tareenka Tünektepe-Sarısu ayaa bilowday
Faahfaahinta tareenka tareenka Tünectepe ayaa lagu dhawaaqay
Hoos u dhigista Tunektepe Cable Line
Dhismaha boosteejada ee Tünektepe ayaa sii socota
Tünektepe Teleferik Qalabka Dayactirka
Mashruuca cusbooneysiinta ee la xidhiidha gaadhiga Tünektepe ee diyaarinta (Video)
Tareenka cirifka ee Sarsiu-Tünektepe
Telefoonka Tünectepe Telefoonku ma furan yahay?
Tünektepe khadka baabuurta
Mashruuca Tünectepe Teleferic
Khadka taraamka ayaa la kordhin doonaa ilaa Arbacada
Kocaeli, Haydarpaşa-Adapazarı bilaabay diyaarinta duulimaadyada rakaabka